काठमाडौंको ३२ नं. वडामा एमालेको प्यानलै विजयी – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
काठमाडौंको ३२ नं. वडामा एमालेको प्यानलै विजयी
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १२:४१
काठमाडौं । मतगणना कार्य सुरु भएको एक सातापछि आज काठमाडौँ वडा नं ३२ को मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । गणना सुरु भएको एक सातापछि आएको परिणामअनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उम्मेदवार नवराज पराजुलीसहित प्यानलनै विजयी भएको छ ।
नवराजले एकीकृत समाजवादीका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सीतादेवी कँडेल (पराजुली) लाई दुई हजार ११७ मतले पछि पार्दै प्यानलसहित विजय हुनुभएको हो । यसअघिको निर्वाचनमा पनि उक्त स्थानबाट यही समूह विजय भएको थियो ।
अध्यक्षमा विजय हुनुभएका नवराजले पाँच हजार २२५ मत प्राप्त गर्नुभएको हो भने सीतादेवीले तीन हजार १०८ मत प्राप्त गर्नुभएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी सदस्यमा एमालेका तर्फबाट भगवान् बुढाथोकी र हरिबहादुर बस्नेत विजयी हुनुभएको छ । महिला सदस्यमा हीरादेवी पाखरेल र दलित महिला सदस्यमा सीता विसुङ्खे विजयी हुनुभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
हाल प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा नौ स्थानबाट कामपाको मतगणना भइरहेको छ । अहिले वडा नं ६, ७, ८, २७, २९, र ३१ को मतगणना कार्य जारी छ । वडा नं १, २, ३, ४, ५, २८, ३० र ३२ को मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
थामबहादुरको सपथसँगै दुई बुँदे
ओन्टारियोसँग टी-२० खेल खेल्दै
महोत्तरीको अध्यक्षमा तमलोपा र
असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तप्रति नेपाल